NgoFebruwari 23 - umlando weholide - Umlando woSuku lwe-Defender of the Fatherland Day
Umlando weholide ngoFebhuwari 23 uyingxenye ebalulekile yomlando wezwe lonke. Igcwele amaqiniso amaningi wombuso, ezombangazwe nezenhlalakahle eziguqula ngokuphindaphindiwe isiphetho sabantu abayizigidi. Umlando ka-Februwari 23, nakuba ngesifushane, kufanele waziwa ngabantu abadala kanye nezingane ngokufanayo. Ngemuva kwalokho, uSuku lwe-Defender of the Fatherland Day akuyona nje inkokhelo ekukhunjweni kanye nokuhlonishwa ku-servicemen, kodwa futhi ukunqoba kwangempela kwamadoda angamaqhawe anesibindi, alungele ukuba isifuba sokuvikela i-Motherland yawo nganoma yisiphi isikhathi.
NgoFebhuwari 23 - umlando weholide kusukela emithonjeni kuze kube namuhla
Ezikhathini ezikude 1918 ngoJanuwari 15 amaKhomishini aseSoviet of People of the USSR wakhipha umyalo ekudalweni Red Army. Ngaleso sikhathi, amabutho ase-Austro-Hungarian ayesakhuthaza, futhi ayecindezela kalula imizi ngaphandle kokuphikiswa. Pskov, Minsk, Revel, Narva ... Ngamunye wabadlula emandleni abahlukumezi. Ngomnyaka weshumi wesibili kaFebruwari, isimo esingaphambili sasiyingozi kakhulu, kanti izwe elincane lezasele likwazi ukulinganisa isimangaliso. NgoFebhuwari 23, uMkhandlu we-People's Commissar we-USSR unikeza isikhalazo kubantu "I-Fatherland Socialland isengozini." Ngosuku, isikhulu esiphezulu uN. Krylenko sidinga abantu ukuba babe yizikhali futhi bavikele izwe. Kusukela kulesi sikhathi umkhankaso wokuvuselela umzimba uqala, ama-servicemen agcwaliswa. Ekugcineni, izitha zazinikelwa, futhi ngenxa yalokho, isayinwe iBrest Peace. Umphumela - i-republic encane yakwazi ukuvikela amalungelo ayo. Umlando onjalo weholide ngoFebhuwari 23 kusukela emithonjeni kuze kube namuhla ujwayele abantu abaningi isikhathi eside. Kodwa ingabe ivumelana ngokuphelele neqiniso. Noma ingabe kukhona omunye umlando wezenzakalo weholidi ethandwayo namhlanje, ngoFebhuwari 23?
Kutheni, eqinisweni, uSuku Lomvikeli Wezwekazi ugujwa ngoFebhuwari 23
Sekuyiminyaka engu-20 edlule izazi-mlando eziningi ziphikisana ngezenzakalo ezenzeka ngoFebhuwari 23, 1918. Kodwa ekugcineni izimpikiswano zancipha - konke kwabonakala. Enye ikhophi yomshini weBolshevik waleso sikhathi kwakungekho amanothi emikhankaso eqinile yamabutho aseJalimane. Ngokuphambene nalokho, ngoFebhuwari 25, 1918, amaBolsheviks akhawuleza ukuqashelwa kwabantu phakathi kwe-Red Army, elindele ukuqhuma okukhulu kunhloko-dolobha. Ngaphezu kwalokho, inhloko-dolobha ngokwayo yathunyelwa eMoscow, eyatshelwa kusengaphambili kozakwethu ngoFebhuwari 26. Umbuzo othi kungani, eqinisweni, usuku lwe-Defender Defender lugubha ngoFebhuwari 23, luvela ngokwawo. Ngemuva kokuhlaziya amadokhumenti namanothi alabo abezindaba, kuyacaca: ngoFebhuwari 23-24 yisikhathi sokuzinikela okungekho emthethweni kweRussia kuya eJalimane. Kodwa ukuze kuphakanyiswe umoya wabantu futhi kugqugquzele umphakathi ukuba nesibindi, usuku lokuvumelana ezimweni ezinikeziwe ludlulelwe esimweni esibalulekile - ukwakheka kwabalimi basebenzi kanye nabasimilayo.
Umlando omfushane weholidi ngoFebhuwari 23 kubantwana
Ukutshela izingane umlando omfushane weholide ngoFebhuwari 23, umuntu akufanele abe njengososayensi bezombusazwe bezombusazwe kanye naba-mlando abaphikisana nakho konke okuqinisekisayo futhi baqinisekise iqiniso lokushicilelwa ngosuku olusenhla. Phela, kubaluleke kakhulu kubafundi besikole ukuba bazizwe benesibindi nokuthanda izwe. Chaza izingane ukuthi i-Motherland yindawo yethu lapho sikhule khona, lokhu kungcwele futhi kuyigugu kubo bonke abantu baseRussia. Futhi bonke abantu abake beza ukuzivikela, noma bekulungele ukumvikela namuhla - sebeyiziqhawe kakade emehlweni ethu ngamunye. Ukuqinisa ulwazi nokwandisa isisekelo sokufundisa, unike abafundi ithuba elifushane lokushintshwa okwenzeka ngoFebhuwari 23 iminyaka eminingi yomlando.
Indlela iholidi likaFebhuwari 23 liye lashintsha ngayo ngokomlando
Eminyakeni ehlukene emlandweni wethu, iholidi elifanayo liguqukile ngaphansi kwethonya lempi, ezombangazwe noma ezenhlalo. Yile ndlela izinguquko zomlando ekunqobeni kwamadoda aseRussia abukeka:
1919-1946 - Usuku lwabaSebenzi nabalimi abaPhezulu;
1947-1992 - Usuku lweSoviet Army and Navy;
1993-1994 - Usuku Lwebutho LaseRussia;
1995-2016 - Umvikeli woSuku lweZibani;
Umlando February 23: ividiyo isethulo
NgoFebhuwari 23 usuku olubalulekile nolunzima. Umlando wayo uqhutshwa kusukela ekuqaleni kwekhulu lama-20 futhi ungakapheli kuze kube manje. Usuku loMvikeli wezwe lobaba lugujwa minyaka yonke ezweni lethu. Amadoda, abafana nabafana bayathokoziswa ngezipho nezinkondlo, bafuna ukuba yiziqhawe zangempela emndenini naseMlandland. Akumangazi ukuthi kusihlwa sosuku lwekhalenda ku-kindergartens, izikole nezinyuvesi ziqhuba izinkulumo futhi zibonisa ukuboniswa kwevidiyo ngomlando ka-Februwari 23. Yonke ingane eyaziwayo kufanele iqonde indlela okhokho abenza ngayo futhi balandele isibonelo sabo.
Isethulo sevidiyo mayelana nomlando weholidi kaFebhuwari 23 nokubaluleka kwalo namuhla
Eholidini elidumile ngoFebruwari 23 umlando wokuba ungathandwa kakhulu. Lithinta kakhulu izigidi zabantu zokuphila kanye namakhulu ezinqumo ezibalulekile ezithathwe omunye umuntu ngesikhathi esithile. Kwabesosayensi abathile, izizathu eziqondile zokuvela kweSuku Lomvikeli Wezwe Lamababa asakaze zitholwe. Kodwa siyazi ngokuqinisekile: ukunqoba sekuyisikhathi eside kuzinikezelwe amasosha e-Red Army, futhi namuhla amadoda angamaqhawe futhi aqine. Mhlawumbe, indaba yethu emfushane yeholidi ngoFebhuwari 23 kubantwana kanye nabantu abadala bayophendula imibuzo ejwayelekile kunazo zonke zabantu abasha, abasha nabadala abafuna ukwazi.
Izindwangu ngo-23 Febhuwari kubantwana basenkulisa, abafana esikoleni nabesilisa abadala - Izithandani ezithandekayo nama-charades ngokuqagela kwabafana be-enkulisa kanye nabantwana besikole
Isimo ngoFebhuwari 23 esikoleni: imidlalo, imincintiswano yabafana, ukuhalalisela okujabulisayo
Izandla ngoFebhuwari 23 ngezandla zabo
Izindlela ezingu-15 zokukhohlwa umfana usuku
Imephu esondelene nomzimba wesilisa: izindawo ezingekho kahle ezifundiswayo
I-Falafel noma i-chicken cutlet
I-couscous nge chard, omisiwe kanye Feta ushizi
Isoka leSandwich negobe
Izimbangela zokubanda ngokocansi (ukucwenga)
Isikhumba sinjengomntwana: I-TOP-3 zokupheka eziphumelelayo zekhofi ukuhlambalaza
U-Julienne wase-salmon ebomvana
Ukupheka okumnandi, okulula futhi okungabizi